WK – Page 8 – GuGuGarGar
မက္ကဆီကို သမ္မတစီးတဲ့ ဘိုးရင်း 787 လေယာဉ်ကြီး ကို မြန်မာငွေကျပ် လေးသောင်းကျော် ( ၂၅ ဒေါ်လာ ) ထဲနဲ့ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
By WKPosted on February 2, 2020
မက္ကဆီကို သမ္မတ အန်ဒရီ မန်နျူရယ် လိုပက်ဇ် အိုဘရာဒိုဟာ လူဦးရေ တစ်ဝက်ကျော် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံအတွက် ယခင် သမ္မတဟောင်း စီးနင်းသွားတဲ့ ဇိမ်ခံလေယာဉ်ကြီးဟာ စရိတ်စက ကြီးလွန်းတယ်ဆိုပြီး ရောင်းထုတ်ဖို့ အမျိုးမျိုး လုပ်နေခဲ့ရာမှာ ခုနောက်ဆုံးအကြံ […]
တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင် မှ ကူးစက်လူနာတစ်ဦး သေဆုံး
ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ ပထမဆုံး သေဆုံးမှု အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်မှ ကူးစက်လူနာ သေဆုံး… ဖေဖော်ဝါရီ ၂ – ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် လူသေဆုံးတဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ […]
ဂျပန်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့၏ နိုင်ငံသားများအား ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဝူဟန် စစ်ဆင်ရေး
ကာ လီ တာ လေကြောင်းလိုင်း ၏ လေယာဉ် အမှတ် K4371 ကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးသည် အလာဆကာ ရှိ တက် စတီဗင် အင်ကားရပ်ခ်ျ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်လာပြီး နောက်လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသူများ၏ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် […]
တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့ မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား (၆၃) ဦး အမိမြေပြန်ဖို့ လေဆိပ် ရောက်ပြီ
By WKPosted on February 1, 2020
၀ူဟန်မြို့ မှ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူ (၆၃) ဦးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အတွက် ၀ူဟန်မြို့ Tianhe လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ လေယာဉ်ပေါ်တ က်ခွင့်(Boarding Pass) များ ထုတ်ယူနေကြပြီဖြစ်သည်။ ဒေသစံတော်ချိန် […]
ဒီနေ့ကစပီး တရုတ်ပြည် ကနေ လာတဲ့သူတွေ အားလုံးကို မြန်မာပြည် ဝင်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပြီ
တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဟူပေပြည်နယ်၊ ဝူဟန်မြို့ မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် 2019 CoronaVirus (2019n-CoV) ကြောင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ် အခြေအနေအဖြစ် […]
တရုတ်ပြည် မှ ပြန်လာသော မုံရွာက ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဒုမန်နေဂျာအား ပြည်သူများ ဖမ်းဆီး ဆေးရုံပို့
တရုတ်ပြည် မှ ပြန်လာသော မုံရွာ က ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဒုမန်နေဂျာအား မုံရွာမှ တာဝန်သိ ပြည်သူများ လမ်းမှာ တားဆီး၍ စစ်ဆေးရန် ဆေးရုံသို့ပို့…. အခုပဲ ဝမ်ပေါင် လက်အောက် ကုမ္မဏီတစ်ခု ရဲ့ ဒုမန်နေဂျာ […]
အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လူနာတစ်ဦး ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသော လူနာတစ်ဦး၏ ခံစားရသည့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဆရာဝန်များက ထုတ်ပြန် မျှဝေလိုက်သည်။ နယူးအင်္ဂလန် ဆေးပညာဂျာနယ်တွင် ပထမဆုံးလူနာသည် ၀ါရှင်တန်မှ အသက် […]
အစပထမ တော့ ပိတ်သင့်တယ်ပေါ့.. အစိုးရ ဘာလို့ မပိတ်သေးတာလဲ ဆိုပြီး နားလည်မှု လွဲသေးတယ်။ တရုတ်လေကြောင်း လိုင်းတွေကို မပိတ်သိမ်းသေးတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကတော့ ခုမှ ကိုယ်လည်းသိတယ်။ သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတရုံး ညွှန်ချုပ် […]
တရုတ် တို့ ဖက်မှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် အကြောင်းအား သတင်းထိန်းချန် ဖုံးဖိထားမှုများ ထွက်ပေါ်လာ
ဒီကနေ့ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ် လာသော သတင်းများ အရ သေဆုံးသူ ၂၅၉ ဦး ရှိလာပြီး ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၁၇၉၁ ရှိလာပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။ ကူးစက်သံသယရှိတဲ့ လူနာကလည်း တသောင်းခွဲကျော် ရှိနေပါတယ်။ […]
ဆရာမက ကျွန်မသား ရဲ့ ​ပါးနှစ်ဖက် ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် (၁၀) ချက်လောက်ရိုက်လိုက်တာ….အထက (၁) အင်းစိန်တွင်ဖြစ်ပွား
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ( ရှိ / မရှိ ) ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ယနေ့ ညနေ ( သို့ ) မနက်ဖြန်မှစ၍ စစ်ဆေးနိုင်တော့မည်
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်ကို ခန့်အပ်ရန် လွှတ်တော်သဘောတူ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု ကို မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုလုပ်နိုင်တော့မည်
Copyright © 2019. Shwe Like.